Truths Inside The Bible: मलाई तिम्रो हृदय देऊ!
मलाई तिम्रो हृदय देऊ!
अक्टोवर ०६, २०१५ (बिजय प्रधान, बाइबलभित्रका सत्यताहरू, पो.ब.नं. २५७६८ काठमाण्डौं, नेपाल।
चाबि पद: हितोपदेश २३:२६
के तपाईंले एकछिन् यस पदमा पिताले आफ्नो पुत्रसँग के मागिरहनुभएको छ भनेर थाहा गर्नु भएको छ? हृदय! मलाई लाग्दैन यो आग्रह कुनै कठोर र अभिमानी बाबुबाटको हो। तर यो आग्रह त त्यो बाबुबाट हो जसमा छोरा प्रति दया र वास्ता भरिएका छन्। चाहे भावनाद्वारा आँखामा आँसु लिएर होस् वा गला भरिएर होस्, पिताले भन्दैछ "हे मेरो छोरा, मलाई तिम्रो हृदय देऊ!"
यहाँ पिताले भौतिक कुराहरू मागिरहनु भएको छैन, तर छोराको हृदय मागिरहनु भएको छ। पुरै अध्यायमा पिताले छोरालाई आफ्नो जीवनलाई असल मार्गमा हिँडाउन र सत्यलाई सुन्न विन्ती गर्नुभएको छ। एउटा छोराले पिताको नाक काट्न सक्छ र राख्न पनि सक्छ। यहाँ पिताले छोराको पतन हुनसक्ने अवस्थाहरूबाट सचेत गराउनु भएको छ।
यूवाहरू, के तपाईंहरूले विचार गर्नुभएको छ, तपाईंहरूले आफ्नो हृदय कसलाई दिनुभएको छ? बढि जसो यूवाहरूमा गलत व्यक्तिहरूलाई आफ्नो हृदय चाँडै दिने बानी हुन्छ, चाहे त्यो साथी होस् वा विपरीत लिङ्गको साथी (Boy/Girl Friend) होस्। कतिपयले त समय व्यतित (Time pass) गर्नको निम्ति मात्र यसो गर्छन्। यस्ता अवस्थाहरूमा गलत साथीहरूको संगतको कारणले अभिभावकहरूलाई समेत टाढा पार्न पुगिन्छ। गलत व्यक्तिलाई हृदय दिनुभयो भने एकदिन तपाईंको हृदयमा चोट पुग्छ र तपाईंबाट तपाईंको अभिभावक पनि खोसिनसक्छ।
धर्मी जनको र बुद्धिमान् छोराको बाबु खुबै रमाउँछ र आनन्दित हुन्छ (हितोपदेश २३:२४)। तपाईं कस्तो छोरा वा छोरी हुनुहुन्छ त? सोच्नुहोस्!